यज्ञप्रसाद शर्मा बिहिबार, असार १८, २०७७, ०७:३१:००
सन् २०२० जुन २५ तारिखका लागि नेपाली दूतावास अमेरिकाले नेपाल फर्कन आत्तिएका र जान चाहनेहरूका लागि टेक्सासकाे डालसबाट नेपाल सरकारले १६ सय डलर भाडा लाग्ने गरी उडानकाे व्यवस्था मिलाएकाे सूचना दूतावासबाट प्रकाशित भएकाे थियाे । हामी धेरै नेपालीहरू स्वदेश आफ्नाे घर आउन आतुर थियाैं । टेक्सासमा हाम्राे ५ जनाकाे समूह थियाे । तर अधिकांश नेपालीहरू अमेरिकाकाे विभिन्न ठाउँमा थिए । तर पनि ऋण धन गरेर भए पनि स्वदेश फर्किन २५ जुनकाे दिन बेलुका ६ः१० मा टेक्सास आएर जहाजमा बस्याैं । जहाज भरिभराउ थियाे । हामीले साेच्याैं- कति धेरै नेपाली अमेरिकामा अड्किएका रहेछाैं ।
डालस फाेर्थ बर्थबाट कतार एअरकाे जहाज नं. QR-730 हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उड्याे । सिटमा बसेपछि एकआपसमा मुखामुख हुन थाल्याे । सरकारले बनाएकाे मापदण्डकाे भाैतिक दूरी, जहाजकाे भाडा दर आदि विषयलाई लिएर सबैले चर्चा गर्न थाले ।
काेराेना भाइरस सुरु हुनुभन्दा अगाडि र यसपटककाे उडानमा कुनै फरक छैन । बेलुका ७ बजेतिर जहाज उड्याे । जहाजमा बसेका कतिले त मास्क पनि लगाएका थिएनन् । परिचारिकाहरूका जहाजका नियमहरू सिकाउँदै थिए । जहाजले आफ्नाे गति लिएपछि शाैचालय जाने, पानी पिउने क्रम सुरु भयाे । एअर हाेस्टेजहरू सेवा प्रदान गर्न आइपुगे । जाहाजमा प्रदान गरिने खाजा र जलपानकाे अनुराेध गर्दै उनीहरू आएपछि आफूलाई इच्छा लागेकाे केही खानेकुरा लियाैँ । केही समयपछि निद्रा लाग्याे । हाम्रा आँखाले विश्राम लिए ।
परिचारिकाहरू खाना लिएर आएपछि ब्युँझियाैं । इच्छा लागे अनुसारकाे खाना खायाैं । अब सुरु भयाे जहाजमा चिनापर्चीकाे कार्यक्रम । एकले अर्काेलाई कहाँबाट आएनुभएकाे ? नेपाल घर कहाँ हाे ? कहिले अमेरिका जानुभएकाे थियाे इत्यादि । जहाजमा म ३ जना बस्ने सिटमा बसेकाे थिएँ । मेराे एकापटि मेरी श्रीमती थिइन् भने अर्कापटि एक भारतीय नागरिक बसेका थिए । अगाडिकाे ३ सिटमा इरानी आमाछाेरा र एक लेबनानी नागरिक थिए ।
हामी फेब्रुअरीकाे पहिलाे साता फर्किने गरी १ लाख २१ हजार प्रतिव्यक्ति भाडा दिएर गएका थियाैं । सरकारले उद्धार गरेर ल्याउँदाकाे एकतर्फी भाडा १६ सय डलर हाे । त्याे दिनकाे नेपाल राष्ट्र बैंककाे सटही दर हेर्दा साे रकम नेपाली रुपैयाँ १ लाख ९२ हजार २ सय रुपैयाँ हुने रहेछ । सरकारले उद्धार गरेकाे भनिएकाे उडानकाे भाडा व्यापारिक उडानकाे भन्दा बढी भएपछि यसलाई उद्धार भन्ने कि लूट ?
दूतावासलाई माध्यम बनाएर बीचमा पारेर उद्धार गरेकाे याे उडान नेपालमा प्रेसिडेन्ट ट्राभललाई माध्यम बनाइएकाे थियाे भने अमेरिकामा सम्पर्क व्यक्ति राकेश तुलाधर र प्रदीप गिरि थिए । हाम्राे भनाइ के हाे भने भन्ने बेलामा उद्धार भन्ने भाडा ४ गुणा लिने ? अर्काे कुरा नेपालका मात्र नभई विश्वका कैयाैं देशका नागरिकलाई राखेर उडान गर्दा काेराेनालगायत अन्य राेगकाे संक्रमणकाे पनि डर बढ्दैन र ? मैले परिचारिकाहरूसँग जहाजमा चालक दलसहित कति जना यात्रु छन् भनेर साेध्दा ३ सय १० जना रहेकाे बताएका थिए ।
दूतावासले ७ दिनभित्र काेराेना परीक्षण गरेकाे रिपाेर्ट लिएर आउनुपर्ने भनी जानकारी गराएकाे थियाे । हामीले प्रतिव्यक्ति २ सय डलरसम्म तिरेर काेराेना परीक्षण गरेर आएका थियाैं । तर हामीले मात्रै परीक्षण गरेर आएकाे कुनै मतलब भएन । किनकि अन्य देशका नागरिकहरू बिना परीक्षण रिपाेर्ट जहाजमा यात्रा गरिरहेका थिए । बरू नेपालमा पुगेर परीक्षण गराएकाे भए हामी ढुक्क हुन सक्ने अवस्था बन्ने थियाे । अमेरिकामा परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपाेर्ट नेगेटिभ आए पनि जहाजमै संक्रमण फैलिन सक्ने त्रासमा यात्रा गर्नुपर्‍याे ।
हमाद विमानस्थलबाट जुन २७ तारिख बिहान १२ः१५ मा कतार एअरकाे जहाज नं. QR-3234 बाट आउँदा केही सहजता थियाे । अधिकांश नेपाली यात्रु थिए । सिट पनि सजिलाे थियाे । सजिलै भयाे । आफ्नाे देश फर्कियाैं भनेर गर्व गर्‍याैं । त्याे उडानमा २ सय २० जना जति यात्रु थियाैं हाेला ।
२७ जुनका दिन बिहान ७ बजे काठमाडाैं विमानस्थलमा उत्रिएका थियाैं हामी । विमानस्थलकाे प्रक्रियामा अढाई घन्टा जति समय लाग्याे । त्यहाँबाट बाहिर निस्केर केहीबेर प्रतीक्षा गरेपछि नेपाली सेनाकाे गाडीमा बसुन्धरास्थित यती इभेन्टमा जाने निर्देशन भयाे । अधिकांश यात्रु ५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका र ८०-८२ वर्षसम्मका थियाैं । १ जनासँग २३-२३ किलाेका २ बाकस र ७ किलाेकाे हाते झाेला थियाे । बसमा सामान चढाउने शक्ति कमैमा थियाे । हामीले सेनाका जवानहरूलाई सामान हाल्न सहयाेगका लागि अनुराेध गर्‍याैं । उनीहरूले हामीलाई आदेश छैन भनेर पन्छिए ।
उनीहरूकाे नेतृत्व गरिरहेकाे अधिकारीका बारेमा साेध्याैं । उनीहरूले १ जना क्याप्टेनलाई देखाइदिए । हामीले आफ्नाे पीडा बताएर सहयाेगका लागि अनुराेध गर्‍याैं । उनले पनि त्यति चासाे दिएनन् । त्यसपछि हामीले सामान घर पठाउने व्यवस्था मिलाएर आफूहरूलाई लिएर जान भन्याैं । उनीहरूले त्याे पनि मान्न तयार भएनन् ।
त्यसपछि हामीले अन्तिम विकल्प दियाैं- हाम्राे समानकाे जिम्मा लिइदिनुस् । हामीलाई जहाँ लगे पनि जान्छाैं । हामी छुटेका दिन सामान लिन्छाै भन्याैं । यति भनेपछि भने उनले सामान गाडीमा हाल्न सहगाेग गराइदिने भए । त्यसपछि सेनाका १ जना भाइले गाडीमा सामान चढाइदिए ।
विमानस्थलमा उड्डयन विभाग, भन्सार, अध्यागमन विभागका सहयाेगी कर्मचारीहरूलाई सहयाेग गर्न लगाउनुपर्‍याे नि भनेर प्रश्न गर्दा क्याप्टेनले हाीले भनेकाे मान्दैनन् भन्ने जवाफ दिए ।
हामी चढेकाे गाडी गुड्दा बिहानकाे साढे १० बजेकाे थियाे । १२-१३ जना यात्रु र बाकसैबाकसले भरिएकाे बसमा हामी उकुसमुकुस भइरहेका थियाैँ । गाडी अलिकति अगाडि बढाएर चालक ओर्लिएर कतै लागे । करिब ५० मिनेट हामी बसभित्रै काेचिइरह्याैँ । गर्मी उत्तिकै छ । भाेक-प्यास छ । चिच्यायाैं करायाैं, कसैले सुन्दैन ।
५० मिनेटपछि बल्ल चालक आए । गाडी अगाडी बढ्याे । ७-८ वटा गाडीकाे अगाडि र पछाडि पर्ने गरी जिपमा सेनाका सुरक्षाकर्मी थिए । १२ बजेतिर हामी गन्तव्यमा पुग्याैं । बस हिलाेकाे बीचमा राेकेर हामीलाई उत्रिन भनियाे ।
बसबाट ओर्लिएकाे आधा घन्टा जति पछि म जाँचका लागि गएँ । २० मिनेट जति लगाएर सेनाका भाइहरूले साेधपुछ गरे । त्यहाँ राम्रै व्यवहार भयाे ।
जाँचबुझकाे काम सकेपछि १ जना मेजर साब मेराे नजिक आएर केही सुझाव भए भन्न भन्नुभयाे । मैले विमानस्थलमा केही समयअघि भएकाे सबै घटना सुनाइदिएँ । उहाँले सुझावका लागि मलाई धन्यवाद दिनुभयाे ।
मैले श्रीमतीलाई गाडीमा सामान रुँघ्न लगाएकाे थिएँ । मैले काम सकेर आएपछि उनलाई पनि जाँचका लागि पठाइदिएँ । जाँचबुझकाे काम सकिएपछि लिन जाने प्रतिनिधिसँग फाेटाे खिचाएर हामीलाई छाेडिएकाे थियाे ।
हामीलाई लिनका लागि हाम्राे छाेरा गएका थिए । उनले हाेम क्वारेन्टाइनमा राख्ने शर्तमा हामीलाई बुझेकाे कागजमा सही गरे । त्यसपछि हामीले २ वटा ट्याक्सीमा ३ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर वानेश्वरमा भएकाे घरसम्म गयाैं । हामी अहिले हाेम क्वारेन्टाइनमै बसेका छाैं ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १८, २०७७, ०७:३१:००
संघीय गणतान्त्रिक राज्यको स्वरुप र प्रशासनिक वैज्ञानिकता